2017-09-27 soplattformlogin Samhällsorientering
Ku soo dhawow casharka 7-aad Waxa aan diirada ku saari doonaa suqa shaqad Sharciyada suuqa shaqada iyo qaab-dhismeedkiisa Noocyada kala duwan ee shaqaaleynta iyo talaabooyinka… Continue Reading 7. Suuqa Shaqada
Casharka 8-aad waxaa aan kaga hadli doonaa talooyin wax ku ool ah oo ku saabsan sida shaqada loo raadsado. 1.Waxaan aan fiirin doonaa sida ay… Continue Reading 8. Shaqo raadsasho
Ku soo dhawoow casharka 9-aad-waxaa aan ka hadleynaa nidaamka cansuuraha ee wadanka Iswiidhen. Noocyada kala duwan ee canshuuraha aan bixino Iswiidhen Sida loo isticmaalo canshuuraha… Continue Reading 9. Canshuurta iyo daryeelka bulshada
Casharka 10-aad waxaan kaga hadli doonaa arimo ku saabsan. 1.Waxbarashada dadka waaweyn 2.Hawlaha la qabto wakhtiyada firaaqada la yahay. Waxaan aan ku bilaabeynaa adiga baahidaada:ma… Continue Reading 10. Waxbarashada dadka waaweyn iyo waqtiyada firaaqada
Ku soo dhawoow casharka 15 kaas oo mowduuciisu yahay dimuqraadiyada-waxaa aan fiirineynaa: 1.Tiirarka dimuqraadiyada 2.Afarta tiir ee salka u ah dastuurka Iswiidhen 3.Nidaamka dimuqraadiyada ee… Continue Reading 15. Dimuqraadiyadda Swiidhan
Casharka maantu waxaa uu ka hadlayaa caafimaadka 1.Waa maxey macnaha caafimaad wanaagsan iyo waxyaabaha saameyynta ku yeelan kara caafimaadkaaga? 2.doorashada hab nololeedka 3.Halista ku jirta… Continue Reading 17. Isdaryeelid Caafimaad
Waxaa aan casharka 18-aad si dhow ugu eegeynaa caafimaadka iyo daryeelka bukaanka iyo ilkaha ee Iswiidhen.sida uu u shaqeeyo daryeelka caafimaadku? Noocyada kala duwan ee… Continue Reading 18. Daryeelka Caafimaadka Iyo ilkaha
Casharka 19aad-waxaa uu ka hadlayaa in lagu gaboobo Iswiidhen 1.Guud ahaaan arimaha ku saabsan gabowga 2.Nidaamka hawlgabka -markaa aan noqono hawlgab 3.Xnaanada waayeelka ee Iswiidhen… Continue Reading 19. Ku gaboobid Iswiidhan